Lake Titicaca (Bolivia), Titicaca - Copacabana
Amerika Atsimo Bolivia Copacabana
Ny faritr'ala dia 56270 km atsimony. km
Farany ambany: 107 m
Haavo ambonin'ny ambony ranomasina: 3812 m
Capacity: 893 km ³
Karazana mineraly: vaovao
Saltability: 1 ‰
Renirano mikoriana: Desaguadero
Misy mahaliana maro, tsara tarehy ary na dia mistery aza ao amin'ny planeta misy antsika. Saingy eo anelanelan'izy ireo dia afaka mamantatra foana ny lalina na ny lehibe indrindra. Amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminareo momba ny farihy avo indrindra eran'izao tontolo izao izahay. Manodidina ny lakandrano dia misy mistery sy tsiambaratelo maro - ny farihy Titicaca dia notsidihan'ireo mpihaza mpihaza sy mpikaroka nandritra ny taonjato maro.
Jeografia ao amin'ny Lake Titicaca
Matetika ny mpianakavy no mihomehy ny anaran'ilay farihy. Ny olon-dehibe, raha mahatsiaro ny lesona momba ny jeografia, eritrereto: any amin'ny sisintaniny, amin'ny inona ny kaontinanta ary aiza ny faritanin'i Lake Titicaca? Ny valiny dia: Ny Lake Titicaca dia miorina any amin'ny Ila Bolantany Atsimo, any Amerika Atsimo, eo amin'ny lemak'i Altiplano ao Andes. Ny toby dia eo amin'ny sisintanin'ny fanjakana roa - Bolivia sy Però, noho izany dia tsy azo atao ny milaza mazava tsara hoe aiza no misy ny farihin'i Lake Titicaca. Samy mampiasa an'io harena sarobidy io ny firenena roa tonta. Noho izany, maniry ny handehanana mankany amin'ny toeram-pialan-tsasatra eto amin'ity dobo ity, dia mamaritra aloha hoe aiza no hianaranao avy any Titicaca. Etsy andaniny, ireo mpandala traikefa dia manoro azy any Bolivia. Fa nahoana - vakio mialoha.
Mieritreritra izy ireo fa ireo no tahirin-drano lehibe indrindra ao amin'ny kaontinanta: ny velaran'ny tany dia 8300 metatra toradroa. km. Raha ampitahaintsika amin'ity mari-pamantarana ity, ny Titicaca dia laharana manaraka ny Farihin'i Marciaibo. Ny rano ao amin'ny farihy dia mangatsiaka, ny salinity dia tsy mihoatra ny ppm. Saingy tsy fantatra ny fiandohan'ny Lake Titicaca.
Inona no mahaliana an'i Titicaca?
Ny haavon'ilay farihy Titicaca ambonin'ny haabon'ny ranomasina dia miovaova ary miankina amin'ny vanim-potoana dia miovaova 3812-3821 m. Ny mahasamihafa, ny hafanana rano dia midina 10-12 degre Celsius, ary amin'ny alina any amoron-dranomasina dia afaka mahita ny fomba hafahafa, mivadika ho ranomandry! Ny halalin'ny vatomamy mivantana amin'ny halavany manontolo dia voatazona hatrany amin'ny 140-180 metatra, ny halalin'ny farihy Farihin'i Titicaca dia 281 m.
Ny anaran'ny farihy - Titicaca - avy amin'ny fitenin'ny Quechua Indians dia adika hoe "rock" ("kaka") ary "puma" ("titi"), biby masina eo an-toerana. Saingy amin'ny teratany avy any amin'ny Farihin'i Titicaca - Aymara sy Quechua - ny vatana dia antsoina hoe "Mamakota", ary taloha - "Lake Pukin", izay midika fa ny dobo dia an'ny vahoakan'i Pukin. Firenena fahiny tao Amerika Atsimo, izay nanjavona talohan'i Columbus.
Ny farihin'i Titicaca dia mbola misarika ny sain'ny mpikaroka, indrindra nanomboka tamin'ny taona 2000, raha nahitana teratany vato manodidina ny 1 kilometatra ny mpitaingina 30 mahery. Inoana fa io no lakolosy tranainy. Etsy andanin'izany, nisy ny sary sokitra iray, toy ny asa tanana tao an-tanànan'i Tiwanaku . Ny taonan'ireo tranga rehetra ireo dia manodidina ny 1500 taona. Misy nosy marobe any amin'ny Farihin'i Titicaca, fa ny nosy Sun no no malaza indrindra. Inoana fa tany no namoronan'ireo andriamanitra ny mpanorina ny foko Inca.
Ahoana no hahatongavana any amin'ny Farihin'i Titicaca?
Avy any Bolivia dia mora kokoa ny mandeha any amin'ny farihy amin'ny La Paz : Manana seranan-tsambo iraisam-pirenena ny tanàna, ary maro ny lalana misimisy avy any amin'ny firenena. Ary avy eo, amin'ny alàlan'ny fitsangatsanganana fitsangatsanganana sy tsipiriany , ianao dia hitsidika ireo toerana mahaliana indrindra amin'ny farihy. Ary tsara kokoa ny mandinika ny fitahirizam-bahoaka avy any Copacabana , any amin'ny morontsirak'i Titicaca. Ity ny tora-pasika lehibe any Bolivia.
Raha mandeha irery ho any Amerika Atsimo ianao dia hanampy anao ny fandrindrana ny Farihin'i Titicaca: 15 ° 50'11 "S ary 69 ° 20'19 "h. sns. Ary tsarovy fa mora kokoa amin'i Bolivia ny mitsidika voalohany ny Lake Titicaca. Eto dia mivoatra ny fotodrafitrasa fizahan-tany, ary ny morontsirak'i Copacabana dia madio kokoa sy mahafinaritra kokoa noho ny tanànan'i Puno ao Però, mipetraka eo amoron'ny farihy. Ankoatra izany, afaka mifankahalala amin'ireo Indiana ao an-toerana ianao ary mividy fahatsiarovana avy amin'izy ireo.
Zava-baovao mahaliana momba ny Farihin'i Titicaca
Mandeha mankany amin'ny farihy, fotoana izao hianatra zavatra momba izany:
Tany Eoropa sambany vao nianatra momba ny farihy ary nahita mari-pamantarana ny fifamerenany tamin'ny taona 1554;
Farihin'i Titicaca - farihy ambony avo indrindra;
Ao Titicaca dia misy renirano sy renirano 300 samy hafa avy any amin'ireo lohasaha tendrombohitra, nefa iray monja no miankina amin'ny anaran'i Desaguadero, ary miditra ao amin'ny Farihin'i Poopo any Bolivia;
zato tapitrisa taona lasa izay dia ambany noho ny 3,750 m ambanin'ny tany ny farihy ary tany amoron-dranomasina mahazatra; Mbola misy sisa tavela amin'ny biby an-dranomasina fahiny;
Araka ny angano eo an-tampon'ny Farihin'i Titicaca dia ny Atlantis azy manokana - tanànan'i Wanaku fahiny.
Mba hivezivezy any an-tendrombohitra dia tokony hiomana tsara foana ianao, mba hahitana mialoha ny fahasarotan'ny lalana rehetra. Raha ny marina dia tsy maintsy manapa-kevitra ianao eo amin'ny morontsiraky ny fireneny izay hankasitraka ny farihy tsara tarehin'i Titicaca. Ary raha mandeha tsy misy mpitari-dalana sy escort, dia ilaina ihany koa ny manoratra ny koordinates (latitude and longitude) amin'ny Farihin'i Titicaca, satria tsy misy mari-pamantarana maro eny an-dalana.
Fiarovana an'i St. Teresa
Sakafo amin'ny fomba fivarotana amin'ny holatra
Ambony fandroana balkonina?
Rindrina fanorenana ao amin'ny trano
Mamirapiratra mamirapiratra mamirapiratra mamirapiratra
Ny karatry ny taom-baovao ho an'ny taona Rooster amin'ny tanany
Mavo papango - recipe
Olana amin'ny tanora ankehitriny
Ny vokatry ny fialana sigara
Sakafo Fresh apple dia tsara sy ratsy
Arabia Saodita - toetrandro
Inona no nofinofin'ny ovy?
Mando ao anaty dacha amin'ny tanany manokana